Posted on फ्रेवुअरी 19, 2010 by आर. बी. बुढाथोकी	होम कार्की
त्रिभुवन विमानस्थलको सुरक्षा घेरा नसकिउन्जेल बिर्तामोडकी शान्ति राई सोमबार आफ्नो परिचय सरिता धिमाल भनेर दिइरहेकी थिइन् । उनको हातमा रहेको पासपोर्टमा पनि त्यही नाम थियो । वैदेशिक रोजगारीका लागि घरेलु काम -हाउसमेड) मा खाडीका दुई मुलुक कुवेत र साउदी अरेबिया पुगिसकेकी राई स्वदेश फिरेपछि सही नाम बताउँदा निकै दंग थिइन् । उता रहुन्जेल उनी धिमालकै परिचयमा काम गरिरहेकी थिइन् । अरूको पासपोर्ट प्रयोग गरी भारतीय बाटो हँुदै उनी कुबेत पुगेकी थिइन् । उनले बेलबारी-३, मोरङकी सरिता धिमालको पासपोर्ट प्रयोग गरी कुवेत र साउदी अरबमा काम गरिन् । श्रम शोषणमा परेकी राईलाई साउदीको रियादस्थित नेपाली दूतावासले सोमबार उद्धार गरी स्वदेश पठाएको हो । उनी आफ्नी काकीले पासपोर्ट खरिद गरिदिएपछि धिमालको पासपोर्टमा फोटो टाँसेर उडेकी रहिछन् ।
अरूको पासपोर्ट प्रयोग गर्ने स्वदेशी महिला मात्रै छैनन्, विदेशी पनि छन् । दार्जिलिङ कालिङपोङकी भेषकुमारी गुरुङले पर्वतको कुमारी पैजाको पासपोर्ट प्रयोग गरी कुवेत गएकी रहिछन् । गुरुङका अनुसार उनीसँग अरू दुई जना गाउँले नेपालीकै पासपोर्टमा गएका थिए । घरमालिकको यातना पाएका उनलाई दलालले नेपाल पठाउँदा त्रिभुवन विमानस्थलमा पक्राउ परेकी थिइन् । तीन महिनाअगाडि रक्तअल्पताले मृत्यु भएकी सिलिगुडीकी आइतादेवीले पनि लमजुङ, बाग्लुङपानी-४ की केशमाया बिकको पासपोर्ट प्रयोग गरेकी रहिछन् । स्थानीय प्रशासनबाटै भारतीय नेपालीमूलका नागरिकले पासपोर्ट बनाइरहेका छन् । उनीहरूले इलाम, पाँचथर र ताप्लेजुङ जिल्लाबाट पासपोर्ट बनाएका तथ्यहरू यहाँ फेला परिरहेको दाहालको दाबी छ । यस्ता महिलाहरू धेरैजसो साउदी र कुवेतमा भेटिएका छन् । पुरुष कामदारहरूले मात्रै भोग्ने गरेका यस्ता समस्या अहिले महिला कामदारले पनि भोग्न थालिसकेका छन् । भारतीय बाटो हुँदै खाडी मुलुक जाने महिला कामदारलाई बढी यो समस्या छ । कुवेतमा पुग्ने धेरै महिलाहरूले प्रयोग गर्ने राहदानीमा फोटो फेरिएका, केटीका अगाडि मिस्टर लेखिएका, उमेर सच्चाइएका र अरू धेरै अनियमितता भएको पाइने गरेको छ । यसलाई गम्भीर रूप लिँदै कुवेती अधिकारीहरूले राजदूत मधुवन पौडेललाई यसरी कामदार नपठाउन अनुरोधसमेत गरेका छन् ।
हाउसमेडमा जान नेपाली महिलालाई सरकारले प्रतिबन्ध गरेको छ । यही कारण महिलाहरू दलालमार्फत भारतीय बाटो प्रयोग गरी खाडी मुलुक जाने गर्छन् । एक जना महिला पठाएबापत कामदार आपूर्ति एजेन्सीबाट ‘आकर्षक कमिसन’ पाइने हुदाँ दलालहरूले आफ्नै खर्चमा पासपोर्ट बनाइदिने गर्छन् । त्यसरी बनाएको पासपोर्ट बहालवाला महिला नगएमा फोटो मात्रै परिवर्तन गरी अर्कैलाई पठाइदिन्छन् । अरूको पासपोर्ट प्रयोग गरेको सूचना कामदारले पछि मात्रै थाहा पाउँछन् । अरूको पासपोर्ट प्रयोग गर्दाको कानुनी जटिलता उनीहरूलाई थाहा छैन । दाहालका अनुसार अरूको पासपोर्ट बोक्नेहरूले कुनै दुर्घटना भएमा क्षतिपूर्ति नपाउने, स्वदेश फिर्न कानुनी झन्झटिलो बोक्नुपर्ने जस्ता समस्या भोग्नुपर्छ । दार्जिलिङकी भेषकुमारी गुरुङले अहिले यही कानुनी जटिला भोगिरहेकी छन् । घरमालिकको यानता सहन नसकेर आएकी उनी तीन सातादेखि कानुनी कारबाही भोगिरहेकी छन् । अध्यागमन विभागले उनलाई पाँच वर्षसम्मको जेल सजाय हुने गरी अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । एकातिर घरमालिकको यातना सहन नसकेर रित्तो हात फर्किएकी भेषकुमारी अहिले नक्कली पासपोर्ट प्रयोग गरेको भनेर मुद्दा खेपिरहेकी छन् । यसले पीडितहरू थप पीडा खेपिरहेका छन् ।
Filed under: समचार « पुरुष बाँझोपनको उपचार राष्ट्रपति डा.यादव स्वदेश फिर्ता »
kaluman rai jhapa, on फ्रेवुअरी 22, 2010 at 6:14 बिहान said:	yahi paisa le garda ta hamra nepali cheli haru bidesi haru ko khelauna bhayara bachna bibas chan hami kati avagi chau bhanne kura ta yahi news herera thaa hun6 ni yo sab hamra nepali daju bhai le gareka ta hun ni haina ra? k hamro nepal ma kanun bhanne kura 6aina?thanks rbg